NISA oo bartilmaameedsanaysa Xildhibaanada Mucaaradka | KEYDMEDIA ONLINE
NISA oo bartilmaameedsanaysa Xildhibaanada Mucaaradka
Fahad Yaasiin ayaa lagu eedeeyay inuu bixiyay amar ah in Xildhibaanadii Sabtidii fowdada ka sameeyay Gollaha Shacabka in la dhibaateeyo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidanka hay'adda NISA ayaa iyagoo fulinaya amarka Fahad Yaasiin Muqdisho ku dhex raadsanaya Xildhibaano is-hortaag ku sameeyay Sabtidii Mooshin mudo-kordhin loogu sameyn lahaa Farmaajo.
Xildhibaanada ayaa hadda baqdin amni uga harey meelihii ay deganaayeen inay u hoydaan habeenkii, waxayna isku ilaalinayaan huteellada amniga ah, iyadoo ka casbi qabo in shirqool lagu dilo.
Xildhibaanadan oo 15 gaaraya waxay qaarkood sheegeen in Ciidan dharcad ah oo Al-Shabaab kasoo goostay lagu daadiyay wadooyinka Muqdisho, iyadoo hubeysan waxaana suurta-gal ah in loo adeegsado dilalka xubnaha mucaaradka.
NISA waxaa ka buuxa xubno Al-Shabaab kasoo goostay balse feker ahaan wali la shaqeeya kooxdan argagaxisadda kuwaasoo u fuliya dilalka shaqsiyaadka muhiimka ah.
Afgembi dadban ayaa ka dhacay Soomaaliya, waxaana xukunka awood Ciidan ku haysta Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo diidan inay doorasho dhacdo, oo xilka si nadiif ah lagu kala wareego, maadaama mudo xileedkii Farmaajo uu dhamaaday Feb 8.